Last update: Wednesday - 29 September 2010
Jeneral Max�ed Faarax Xassan Ceydiid wuxuu ku dhashay magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya sanadku markuu ahaa 1934tii.
Wuxuu waxbarashadiisii dugsiga hoose & dhexe ku dhammeystay magaalada Muqdihso muddadii u dhaxeysay 1946dii � 1949kii, wuxuu horraantii sanadkii 1952dii-1953dii galay dugsigii tababarka ciidamada ee Dhanaane ee duleedka magaalada Muqdisho.
Sanadkii 1954-1956dii Jeneral Ceydiid wuxuu ka mid ahaa saraakiishii dhinaca waxbarashada loogu qaaday kulliyadda ciidamada ee magaalada Cesano, Rome ee dalka Talyaaniga. Sidoo kale wuxuu intii u dhaxeysay 1956dii tababar ku qaatay dugsigii tababarka ciidanka boliiska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho, tababarkaas ka dibna wuxuu mar kale waxbarasho u tagay dalka Talyaaniga intii u dhaxeysay 1959kii � 1960kii, halkaas oo lagu siiyay dallacaadda sarkaalnimo.
Wuxuu sidoo kale waxbarasho u tagay Jeneral Ceydiid dalkii la oran jiray USSR intii u dhaxeysay 1963dii � 1966dii kulliyadda ciidamada Frunza ee dalkii Midowga Sofiyeeti ee �USSR�, haddana loo yaqaanno Ruushka.
1. Taliyihii ciidamada saldhigga boliiska ee degmada Xudur ee gobolka Bakool intii u dhaxeysay 1957-1958dii.
3. Taliyihii ciidamada boliiska ee Jubbada Hoose eemagaalada Kismaayo sanadkii 1959kii.
4. Taliyihii dugsiga Fort Bettego ee hadda loo yaqaan Xalane intii u dhaxeysay 1960dii-1962dii.
5. Taliyihii tababarrada, howlgallada ee ciidamadii Qalabka Sida ee magaalada Muqdisho, sanadkii 1963dii.
6. U qeybsanihii dhinaca ciidamada ee Soomaaliya, safaaraddii ay Soomaliya ku laheyd dalka Ruushka sanadkii 1966dii.
7. Taliyihii dhinaca howlgallada ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed intii u dhaxeysay 1966dii-1968dii.
8. Taliye ku xigeenkii ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee Waqooyiga Soomaaliya ee magaalada Hargeysa 1968dii-1969kii.
9. Taliyihii dhinaca howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed intii u dhaxeysay bishii July-bishii November, sanadkii 1969kii.
Jeneral Max�ed Faarax Ceydiid wuxuu ka mid noqday xubnihii Golihii Shacbiga Qaranka muddadii u dhaxeysay 1980kii illaa 1984tii, wuxuuna xubin ka noqday guddigii arrimaha difaaca ee guddi hoosaadyadii baarlamaanka Soomaaliya.
Sanadkii 1984tii waxaa loo magacaabay in uu dalka Hindiya safiir uga noqdo dowladdii dhexe ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliya, xilkaas oo uu hayay illaa laga soo gaaro sanadkii 1989kii waqtigaas oo la sheego in Allaha u naxariistee Dr. Ismaaciil Jimcaale Cosoble uu ugu tagay magaalada Mumbai ee dalka Hindiya si uu u hoggaamiyo garabka ciidamada ee jabhaddii USC oo dagaal kula jirtay dowladdii madaxweyne Max�ed Siyaad Barre.
Dabayaaqadii sanadkii 1990kii wuxuu Jeneral Ceydiid ku dooday in uu yahay guddoomiyihii garabka hubeysan ee ururkii USC ee Mustaxiil, wuxuuna magaalada Muqdisho soo galay maalmo ka dib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii Soomaaliya Max�ed Siyaad Barre, ka dib kacdoon dadweyne oo ka bilowday magaalada Muqdisho oo uu hoggaaminayay Dr. Xussein Xaaji Max�ed �Bood�.
05tii bishii June sanadkii 1993dii waxay taageereyaashii Jeneral Ceydiid weerar gaadmo ah ku qaadeen askartii ka socotay dalka Pakistan, waxayna 24 ka mid ah ku dileen weerarkaas, ka dib weerarkaas lagu laayay ciidamadii nabad illaainta ku qasabtay Qaramada Midoobay in ay soo saarto qoraal lagu soo qabanayo hoggaamihii ururkii USC/SNA Gen. Max�ed Faarax Ceydiid.
Jeneral Ceydiid wuxuu ku geeriyooday magaalada Muqdisho ka dib markii dagaal dhiig fara badani uu ku daatay ay isaga horyimaadeen isaga & Cusmaan Caato taariikhdu markii ay aheyd 01dii bsihii August, sanadkii 1996dii, waxaana lagu aasay xaafadda Huriwaa ee magaalada Muqdisho maalin ka dib markii uu geeriyooday oo ku beegan 02dii August 1996dii, waxaa xilkii xagga hoggaaminta ee uu hayay kala wareegay wiilka uu dhalay Xussein Max'ed Faarax Ceydiid. Jeneral Ceydiid intii aanu geeriyoon ka hor wuxuu qoray qoraalladan aan annigu lafteyda qaarkood arkay markii la daabacay horraantii sanadihii 90kii markii ay dagaallada ku dhexmarayeen isaga & madaxweynihii dowladdii KMG ahaa ee xilligaas Cali Mahdi Max�ed.
Kulankii ugu horreeyay ee dib u heshiisiinta ee dhexmaray Cali Mahdi Max�ed & Gen. Max�ed Faarax Ceydiid. Muqdisho, Soomaaliya.
1989: M.F. Aideed, 1988, Somali Dictator Said Barre�s new wicked survival strategy.